Naya Post Nepal | १७ वर्षीय बहिनी र २२ वर्षीय दिदि बहिनीले गरे कसैले सोच्नै न’सक्ने काम ! प्रहरी पनि पर्यो छ’क्क
१७ वर्षीय बहिनी र २२ वर्षीय दिदि बहिनीले गरे कसैले सोच्नै न’सक्ने काम ! प्रहरी पनि पर्यो छ’क्क
अनाथालयको नाममा सहयोग माग्दै ठगी गरेको आ”रो’पमा दुई जना युव’तीहरु प”क्रा”उ परेका छन् । जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका १ वैरियामा रकम संकलन गरेको अ’वस्थामा प”श्चिम नवलपरासी घर भएका २२ वर्षीया शान्ति पौडेल र उनकी १७ वर्षीया बहिनी प’क्रा”उ परेका हुन् ।
वै’रिया बजारमा रकम सं”क’लन गर्ने क्र”ममा प’क्रा”उ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पि’प”राले जनाएको छ । प”क्रा’उ परेकाहरूबाट संयुक्त नेपाल अनाथ तथा अ’स’हाय बालबालिका समाज काठमाडौंको सहयोग र’सि’दसमेत फे”’ला परेको छ ।
वैरि’या बजारमा सहयोग संकलन गर्ने क्र”ममा स्थानीय व्यवसायीले शं”का ला”गेपछि प्रहरीलाई ख”बर गरेका थिए । सम्बन्धित सं’स्था”मा फोन स’म्प”र्क गरेपछि न”क्क”ली र”सि’द ब’ना’ए”र स’हयोग सं’क’ल”न गरेको खु”लेको थियो ।
प’क्रा”उ परेकी पौडेल सं’स्था’मा पूर्व कर्म’चारी रहेको र तीन महिनाअघि उनले सं’स्था छाडेको इ’लाका प्रहरी का’र्यालय पि”प”राका प्रहरी निरीक्षक दिनेश गुरुङले बताए ।
२०७८ माघ ३, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 255 Views